။ တက္ကဆက် v ဂျွန်ဆင် (1989): အလံ Burning တစ်ရာဇဝတ်မှု Be နိုင်သလား?
အလံတစ်နိုင်ငံရေးသိပ္ပံကို Message တစ်ရာဇဝတ်မှု Send ဖို့လောင်ကျွမ်းသလဲ?
ဤရွေ့ကားတက္ကဆက် v ၏ 1989 ခုနှစ်တရားရုံးချုပ်အမှု၌ စုပေါင်း. မေးခွန်းများကိုခဲ့ကြသည်။ ဂျွန်ဆင်။ ဒါဟာဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုသို့အများအပြားပြည်နယ်ဥပဒေများမှာတွေ့ရှိအလံ desecration အပေါ်ပိတ်ပင်မှုကိုဆောင်ခဲ့သောတစ်မြေမှတ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
တက္ကဆက်ပြည်နယ် v နောက်ခံ။ ဂျွန်ဆင်
အဆိုပါ 1984 ရီပတ်ဘလီကန်အမျိုးသားကွန်ဗင်းရှင်းတက္ကဆက်ပြည်နယ် Dallas ရာအရပျကိုယူ။
စည်းဝေးကြီးအဆောက်အဦး၏မျက်နှာစာမှာတော့ Gregory Lee က (ဂျို) ဂျွန်ဆင်ရေနံဆီအတွက်အမေရိကန်အလံစိမ်နှင့်များ၏မူဝါဒများဆန္ဒပြနေစဉ်မီးရှို့ ်နယ်ရေဂင် ။ သည်အခြားဆန္ဒပြသူတွေ "အမေရိကတိုက်ရွတ်ဖွငျ့ဤလိုက်ပါသွား; အနီ, အဖြူနှင့်အပြာ; ငါတို့သည်သင်တို့အပေါ်တံတွေးထွေး။ "
Johnson ကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိသို့မဟုတ်သိလျက်တစ်ပြည်နယ်သို့မဟုတ်အမျိုးသားရေးအလံ desecrating ဆန့်ကျင်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းပြီးတက္ကဆက်ပြည်နယ်ဥပဒေအရပြစ်မှုထင်ရှားခဲ့သည်။ သူက $ 2000 ဒဏ်ရိုက်ခြင်းနှင့်ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရသည်။
သူကမှအယူခံ တရားရုံးချုပ် တက္ကဆက်ပြည်နယ်ကအမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်မှု၏သင်္ကေတအဖြစ်အလံကာကွယ်ပေးရန်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့စောဒကတက်ရှိရာ။ ဂျွန်ဆင်သည်ကိုယ်တော်တိုင်ဖော်ပြအားမိမိလွတ်လပ်ခွင့်ကိုကသူ၏လုပ်ရပ်များ protected ကြောင်းစောဒကတက်ခဲ့ကြသည်။
တက္ကဆက်ပြည်နယ် v ဂျွန်ဆင်: ။ ဆုံးဖြတ်ချက်
အဆိုပါတရားရုံးချုပ်ဂျွန်ဆင်၏မျက်နှာသာအတွက်45 အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ သူတို့ဟာတားမြစ်ချက်တစ်ခုအလံကိုမီးရှို့စေမယ်လို့ပြစ်မှုကြောင့်ငြိမ်းချမ်းရေး၏ပြိုပျက်ရာတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်သောသောပြောဆိုချက်ကိုပယ်ချခဲ့သည်။
နိုင်ငံတော်ရဲ့အနေအထားကို ... အထူးသဖြင့်စကားရပ်မှာလေးနက်သောပြစ်မှုကြာတဲ့ပရိသတ်ကိုသေချာပေါက်ငြိမ်းချမ်းရေးနှောက်ယှက်ဖွယ်ရှိသည်နှင့်ဟူသောအသုံးအနှုနျးကဒီအခြေခံပေါ်မှာတားမြစ်ထားသောစေခြင်းငှါမယ့်အရေးဆိုရန်ပမာဏသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေးထုံးထိုကဲ့သို့သောယူဆဘက်ကြပါဘူး။ ဆန့်ကျင်တွင်, သူတို့အစိုးရကိုကျနော်တို့ရဲ့စနစ်ကအောက်မှာလွတ်လပ်စွာပြောဆိုတဲ့ကျောင်းအုပ်ကြီး "function ကိုအငြင်းပွားမှုဖိတ်ခေါ်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုပါသည်။ ဒါဟာအမှန်တကယ်အကောင်းဆုံးပင်အမျက်ဒေါသရန်လူတတ်၏ကမငြိမ်သက်တဲ့အခွအေနေ induces သည့်အခါ၎င်း၏အဆင့်မြင့်ရည်ရွယ်ချက်အစေခံတို့သည်ဖြစ်ကြအဖြစ်အခြေအနေများနှင့်အတူမကျေနပ်မှုဖန်တီး, ဒါမှမဟုတ် ... ဖြစ်နိုင်တယ်။ "
တက္ကဆက်ပြည်နယ်သူတို့အမျိုးသားရေးစည်းလုံးညီညွတ်မှု၏သင်္ကေတအဖြစ်အလံထိနျးသိမျးဖို့လိုအပျကွောငျးကိုပြောဆိုထားသည်။ ဤသည်ဂျွန်ဆင်တစ် disfavored စိတ်ကူးဖော်ပြခဲ့ conceding နေဖြင့်၎င်းတို့၏အမှုထိခိုက်ပျက်ပြားစေ။
ပညတ္တိကျမ်းပါလျှင် desecration တရားမဝင်ကြောင်းဖော်ပြထားကတည်းက "ဟုအဆိုပါသရုပ်ဆောင်ကအလေးအနက်ထားတဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသည့်လူပုဂ္ဂိုလ်များကိုမှားယွင်းလိမ့်မယ်သိတယ်" ဟုအဆိုပါတရားရုံးသင်္ကေတကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ပြည်နယ်၏ကြိုးပမ်းမှုအချို့မက်ဆေ့ခ်ျဖိနှိပ်ဖို့ကြိုးစားမှုမှချည်ထားသောခဲ့ကွောငျးကိုမြင်တော်မူ၏။
ပထမပြင်ဆင်ချက်အခြေခံအခွခေိုမူအရလည်းမရှိဆိုပါကလူ့အဖွဲ့အစည်းအယူအဆကိုကိုယ်နှိုက်ကထိုးစစ်သို့မဟုတ်လွဲတွေ့ရိုးရှင်းစွာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အစိုးရအနေနဲ့စိတ်ကူး၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးတားမြစ်မပြုစေခြင်းငှါဖြစ်ပါသည်။ [ ... ]
[F ကို] ထိုကဲ့သို့သောဂျွန်ဆင်ရဲ့အဖြစ်အကငျြ့ဘို့ရာဇဝတ်ပြစ်ဒဏ် orbidding ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလံဒါမှမဟုတ်စိတ်အားခံစားခကျြဖွငျ့ကစားအထူးအခန်းကဏ္ဍအန္တရာယ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ... ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အလံအကောင်းဆုံးနှင့်ထိုကဲ့သို့သောဂျွန်ဆင်ရဲ့အဖြစ်ဝေဖန်မှုများကျွန်တော်တို့ရဲ့သည်းခံငါတို့အစွမ်းသတ္တိ၏နိမိတ်အရင်းအမြစ်ကြောင်းပြစ်မှုထင်ရှား၏ရောင်ပြန်ဟပ်ကြောင်းလွတ်လပ်မှုနှင့်နိုင်အောင်၏အခြေခံမူတစ်ခုကြသည်ကိုထင်ရှားစွာပြမည်ဖြစ်ပါသည်။ ...
အလံရဲ့အထူးအခန်းကဏ္ဍထိနျးသိမျးဖို့လမ်းသည်ဤကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်. ကွဲပြားခြားနားခံစားရတဲ့သူတွေကိုအပြစ်ပေးဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာသူတို့မှားကြောင်းသူတို့ကိုဆွဲဆောင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ... ကျွန်တော်တို့သည်လောင်ကျွမ်းသောအလံညွှတ်တဲ့အတွက်အားဖြင့်ထက်အလံ burner ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုတန်ပြန်ရန်တဦးတည်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်မရှိပိုကောင်းလမ်းဝှေ့ယမ်းထက်ပင်ထက်ကိုမီးရှို့သောအလံများ၏ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်၏အဘယ်သူမျှမ surer နည်းလမ်းတစ်အလံကိုမီးရှို့ရန်မပိုသင့်လျော်သောတုံ့ပြန်မှုစိတ်ကူးနိုင်ပါတယ် အားဖြင့် - ဒီနေရာမှာသက်သေခံတယောက်တည်းအတိုင်း ပြု. - ၎င်း၏တစ်ဦးလေးစားမှုသင်္ဂြိုဟ်ဖြစ်နေဆဲအဆိုအရသိရသည်။ ဒါကြောင့်အကျင့်ကိုကြှနျုပျတို့သညျဤသက်ဝင်အထိမ်းအမှတ်ကိုကိုယ်စားပြုသောလွတ်လပ်ခွင့်ကိုမှေးမှိန်ဘို့ကျနော်တို့၎င်း၏ desecration အပြစ်ပေးခြင်းအားဖြင့်အလံသန့်ရှင်းစေကြပါဘူး။
အလံမီးလောင်ရာအပေါ်ပိတ်ပင်မှုကိုထောက်ခံသူတွေသူတို့ပဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, ထိုးစစ်စိတ်ကူးများ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးတားမြစ်ဖို့ကြိုးစားနေကြသည်မဟုတ်ဟုဆိုသည်။ ဤသည်ကသာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်သက်ဆိုင်ရာအတွေးအခေါ်များကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဖော်ပြ၏အခြားနည်းလမ်းများပိတ်ပင်ကြောင့်လက်ဝါးကပ်တိုင် desecrating တွေ့ခဲ့ရပါပြီနိုင်ဆိုလိုသည်။ အနည်းငယ်သျောဤဆင်ခြေကိုလက်ခံလိမ့်မယ်။
အလံကိုမီးရှို့သကဲ့သို့ဖြစ်၏ ဘုရားကိုလွန်ကျူးသို့မဟုတ်တစ်ပုံစံ "အချည်းနှီးသခင်ဘုရား၏နာမကိုအမှီယူပြီး," ဒါဟာလေးစားတစ်ခုခုယူပြီးတစ်ခုခုအခြေစိုက်စခန်း, အဓမ္မနှင့်လေးစားမှုမထိုက်တန်သို့ပြောင်းလဲ။ သူတို့ကိုမီးရှို့ခံတစ်ဦးအလံမြင်သောအခါလူတို့သည်အငြိုးထားသောဖြစ်ကြောင်းအဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားကိုလွန်ကျူးသကဲ့သို့ - မီးလောင်ရာသို့မဟုတ် desecration ကာကွယ်ထားသည်အဘယ်ကြောင့်ဒါဟာအစပါပဲ။
ဤကိစ္စတွင်အလံ၏အဓိပ္ပါယ်ကိုကျော်ဆွေးနွေးငြင်းခုံ၏အနှစ်ဖြစ်စေခဲ့သည်။ ဒါကပြင်ဆင်ရန်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုပါဝင်သည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အလံ၏ "ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ desecration" ၏တစ်ဦးတားမြစ်ချက်အဘို့ခွင့်ပြုပါရန်။
ပိုများသောချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ချက် 1989 ၏အလံကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအက်ဥပဒေကျမ်းပိုဒ်မှတဆင့်အလျင်စလိုလုပ်ဖို့ကွန်ဂရက်မှုတ်သွင်းဥပဒေကဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဖီဆန်အတွက်အမေရိကန်အလံ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ desecration ပိတ်ပင်ရန်ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမကအခြားရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။
တက္ကဆက်ပြည်နယ် v ။ ဂျွန်ဆင်သဘောထားကွဲလွဲ
တက္ကဆက်ပြည်နယ် v အတွက်တရားရုံးချုပ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကို။ ဂျွန်ဆင်တညီတညွတ်တည်းမဟုတ်ခဲ့ပေ။ လေးတရားသူကြီး - အဖြူရောင်, O'Connor, Rehnquist နှင့် Stevens - အများစုရဲ့အငြင်းအခုံနှင့်အတူသဘောမတူ။ သူတို့ကအလံကိုမီးရှို့ခြင်းဖြင့်နိုင်ငံရေးသတင်းစကားကိုဆက်သွယ်အလံရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသမာဓိရှိကာကွယ်အတွက်ပြည်နယ်အကျိုးစီးပွားပေးရကြောင်းမမြင်ရ။
တရားသူကြီးအဖြူရောင်နှင့် O'Connor ဘို့ရေးသားခြင်း, တရားသူကြီးချုပ် Rehnquist စောဒက:
[T က] ဂျွန်ဆင်အားဖြင့်အမေရိကန်အလံ၏သူလူထုမီးလောင်ရာစိတ်ကူးများမဆို Exposition မရှိမရှိမဖြစ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာကမိဿဟာယဖောက်ဖျက်လှုံ့ဆော်တဲ့သဘောထားကိုရှိခဲ့ပါတယ်။ ... [ဂျွန်ဆင်ရဲ့အလံ၏အများပြည်သူမီးလောင်ရာ] သိသာမိမိတိုင်းပြည်၏ဂျွန်ဆင်ရဲ့ခါးသီးမကြိုက်နှစ်သက်ဖျောပွခဲ့တယျ။ သို့သော်သူ၏လုပ်ရပ် ... ပါးခဲ့ကြပါဘူးနှင့်တစ်ဒါဇင်ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေထဲမှာမယ့်အဖြစ်အခိုငျအမာပါးမခံခဲ့ရကြောင်းဘာမျှပြောကြားခဲ့သည်။
ဒီအတိုင်းအတာအားဖြင့်, ထိုစိတ်ကူးများကိုအခြားနည်းလမ်းတွေထဲမှာဖျောပွနိုငျပါလျှင်အတွေးအခေါ်များ၏ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရဲ့စကားရပ်ကိုပိတ်ပင်ရန်အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကြောင့်အလိုမရှိ, အစားစကားကိုပြောနိုင်လျှင်စာအုပ်ပိတ်ပင်ရန်အဆင်ပြေရဲ့ဆိုလိုမလဲ
Rehnquist ယင်းကြောင်းဝန်ခံသည် အလံလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်ထူးခြားတဲ့ရာအရပျယူထားသော ။
ဒါကအလံမသုံးပါဘူးရသောစကားရပ်တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာပုံစံအတူတူပင်သက်ရောက်မှု, အရေးပါမှု, ဒါမှမဟုတ်အဓိပ်ပာယျလိမျ့မညျမဟုဆိုလိုသည်။
ဝေးတစ်ဦးအမှုဖြစ်ခြင်းကနေ "တဦးတည်းရုပ်ပုံတစျထောငျစကားလုံးများကိုတန်ဖိုးရှိဖြစ်ခြင်း," အလံမီးလောင်ရာကပြောတရားမျှတပုံတစ်ခု inarticulate ဝက်အော်သို့မဟုတ်အသံဗလံနှင့်ညီမျှသည်, မဆိုအထူးသဖြင့်စိတ်ကူးကိုဖော်ပြခြင်းငှါမကိုမှအရသာခံရဖို့အများဆုံးဖွယ်ရှိသည်, ဒါပေမယ့် အခြားသူများကိုဆန့်ကျင်ဘက်ပြုရန်။
ဝက်အော်အော်ဟစ်ကြသို့သော်သူတို့ကိုတားမြစ်သည့်ဥပဒေများလာအောင်နှိုးဆွကြပါဘူး။ အများပြည်သူအတွက် grunts သူတစ်ဦးထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်ကြည့်ရှုနေသည်, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့တပြင်လုံးကိုစာကြောင်းများအတွက်ဆက်သွယ်မရဘို့ထိုသူတို့ကိုအပြစ်ပေးကြပါဘူး။ လူများတို့သည်အမေရိကန်အလံ၏ desecration အားဖြင့် antagonized နေတယ်ဆိုရင်, ဒါဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကထိုကဲ့သို့ပြုမူခြင်းဖြင့်ဆက်သွယ်လျက်ရှိသည်ယုံကြည်ရာ၏ဖြစ်ပါတယ်။
သီးခြားသဘောထားကွဲလွဲခုနှစ်, တရားမျှတမှု Stevens wrote:
[အို] သူကိုအခြားသူများသိလျှင်ပြည်သူ့ရင်ပြင်၌မီးလောင်သောအားဖြင့်အလံလေးစားမှုတစ်ခုမက်ဆေ့ခ်ျကိုသိရှိစေရန်ရည်ရွယ် ne မည်သို့ပင်ဆိုစေ desecration ၏အပြစ်ရှိကြောင်းဖြစ်လိမ့်မယ် - သူတို့ကရည်ရွယ်သတင်းစကား misperceive ဖြစ်ကောင်းရိုးရှင်းစွာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ - အလေးအနက်ထားငြိုးဖြစ်လိမ့်မည်။ သူလည်းဒီနားလည်မှုရှိသူများမျက်မြင်သက်သေများအချို့တို့ကခေါ်ဆောင်သွားပြစ်မှုလျှော့ချမဟုတျကွောငျးကိုသိလျှင်အမှန်မှာထိုသရုပ်ဆောင်အားလုံးဖြစ်နိုင်သမျှမျက်မြင်သက်သေများသူလေးစားမှုတစ်ခု Message ပေးပို့ဖို့ရည်ရွယ်ထားကြောင်းနားလည်ကြလိမ့်မည်သိတယ်လျှင်ပင်သူနေဆဲ desecration ၏အပြစ်ရှိကြောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။
ဤသည်ကအခြားသူတွေကအနက်ကိုဘော်ပြပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုအပေါ်မှာအခြေခံလူရဲ့မိန့်ခွန်းကိုထိန်းညှိဖို့ခွင့်ရဲ့ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ "ဆန့်ကျင်ဥပဒေများအားလုံးသည် desecrating တစ်ဦးအမေရိကန်အလံလူသိရှင်ကြားပြောင်းလဲအလံပြသ၏အခြေအနေတွင်အဲဒီလို" ။ ဤသည်ကိုလည်းမျှသာအလံတစ်ခုအထိမ်းအမှတ်ပူးတွဲတားမြစ်ကြောင်းဥပဒေများလျှောက်ထားမည်ဖြစ်သည်။
ပုဂ္ဂလိကအတွက်လုပ်နေတာတဲ့ရာဇဝတ်မှုမဟုတ်ပါဘူး။ ထို့ကြောင့်, တားဆီးဖို့အန္တရာယ်အမှုအရာကိုသက်သေခံအခြားသူတွေ၏ "အန္တရာယ်" ဖြစ်ရပါမည်။ ဒါဟာမျှသာအများပြည်သူဟောပြောချက် platitudes လျှော့ချမည်ဖြစ်ကြောင်း, မဟုတ်ရင်, မှားခံရခြင်းမှသူတို့ကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့မဖြစ်နိုင်ပါ။
အဲဒီအစား, ကအလံနှင့်အနက်ကိုဦးတည်နေတဲ့အခြေခံကျကျကွဲပြားခြားနားသောသဘောထားကိုကြုံနေရထံမှအခြားသူများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဖြစ်ရပါမည်။ ဟုတ်ပါတယ်, တစ်ဦးတည်းသာသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုကျပန်းလူတွေကိုစိတ်ဆိုးလျှင်တစ်စုံတစ်ဦးကိုတစ်ဦးအလံ desecrating များအတွက်တရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းမဖြစ်နိုင်ပါပဲ။ ဒါကသက်သေပိုကြီးတဲ့ဂဏန်းကမောက်ကမသောသူတို့အဘို့သိုထားလိမ့်မည်။
တနည်းအားဖြင့်ဝေးလွန်းသူတို့ရဲ့ပုံမှန်မျှော်လင့်ချက်များအပြင်ဘက်တစ်ခုခုနှင့်အတူရင်ဆိုင်မရရန်အများစု၏ဆန္ဒကိုစိတ်ကူးများ၏အမြိုးမြိုးလူနည်းစုများကထုတ်ဖော်ပြောဆို (နှင့်အဘယ်သို့သောလမ်းအတွက်) ဖြစ်ကြောင်းအဘယျသို့ကန့်သတ်နိုင်ပါတယ်။
ဤသည်မှာနိယာမအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာဥပဒေနှင့်အပင်လွတ်လပ်မှု၏အခြေခံမူများကိုလုံးဝနိုင်ငံခြားဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ဆွဲဆောင်အားကောင်းလှတဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု v ၏တရားရုံးချုပ်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲအမှု၌နောက်တစ်နှစ်ဖော်ပြထားခဲ့သည် Eichman ။ :
အငြိုးတကြီးနဲ့လူမျိုးစုနှင့်ဘာသာရေး epithets ကဲ့သို့မူကြမ်း၏အောက်တန်းငြင်းပယ်ခြင်း, scurrilous ရုပ်ပြောင် - - အလံ desecration နေစဉ်အများအပြားမှနက်ရှိုင်းစွာထိုးစစ်ဖြစ်ပါသည်, အစိုးရလူ့အဖွဲ့အစည်းအယူအဆကိုကိုယ်နှိုက်ကထိုးစစ်သို့မဟုတ်လွဲတွေ့ရိုးရှင်းစွာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိတ်ကူးတစ်ခု၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးတားမြစ်မည်မဟုတ်ပါ။
ဒါကအတိအကျအဘယ်အရာကိုမီးလောင်ရာ, defacing, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦး desecrating ရဲ့ အမေရိကန်အလံ မကြာခဏပါဘူး။ တူညီလေ့လေးစားကြည်ညိုနေကြသည်သောအခြားအရာဝတ္ထု defacing သို့မဟုတ် desecrating နှင့်အတူမှန်သည်။ အစိုးရကလူတွေရဲ့သာအတည်ပြုဆကျသှယျဖို့ထိုကဲ့သို့သောအရာဝတ္ထုများ၏အသုံးပြုမှု, အလယ်အလတ်နှင့် inoffensive မက်ဆေ့ခ်ျများကန့်သတ်ရန်မရှိလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။
"ဘုရားအောက်မှာ" သစ္စာ၏ Pledge အတွက် Be သင့်တယ်
ဘုရားမဲ့ဝါဒီဘာသာရေး Be နိုင်သလား? ဘာသာရေးဘုရားမဲ့ဝါဒီများရှိပါသလား
Henrik Ibsen ရဲ့ Hedda Gabler ထံမှ quotes
Ping S59 သံ: Back ကိုရှာနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မူရင်းကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
အဆိုပါ Columbine အသတ်ခံရမှု၏သားကောင်များ
တိုင်းဝါသနာရှင်ပိုင်ဆိုင်သင့်ကြောင်းအာဖရိကရက်ဂေး CD များ
ရေဒီယိုရဲ့သမိုင်းမှာ 10 အရေးကြီးပထမ
ဘယ်လိုကောင်ဘွိုင်ပွဲကောင်းဘွိုင်သို့မဟုတ် Cowgirl ဖြစ်
Philly Soul များအတွက်အဆောက်အအုံပုံစံရေးဆွဲခြင်း: အဆိုပါတိုးတက်မှုနှုန်း
လီယိုနာဒို, Michelangelo & Raphael: အီတလီအမြင့် Renaissance ၏အနုပညာ
Point ဖိနပ် Rehardening